Haisi Kuedza Kunoshamisa Vanhu | Martech Zone
Chipiri, August 22, 2006 Muvhuro, Nyamavhuvhu 24, 2009 Douglas Karr
Anogadzira hukuru pabasa rangu nhasi aburitsa mushumo mutsva waanga anyora mukupera kwesvondo. Iyo inonakidza mushumo, yakavakwa neSQL yekuzivisa masevhisi, inoita zvakanaka, iri chokwadi, uye yakanyatso rongeka.
Sezvatiri kuburitsa izvi kune vedu vekunze, mushambadzi akataura kuti vanhu vekambani vanoshamisika, asi vamwe vanogadzira vanowana kuseka nekuti ivo vanoziva kuti zvaive nyore sei kuronga mushumo. Ivo vamwe vagadziri vanogona kuseka, asi havazi ivo vari kuwana kutariswa.
Ndakapindura kumusimudziri kuti hachisi basa rino shamisa vatengi vedu kana vashandi vedu. Ivo havana zano rekuti chii chinotora kuseri kwechiitiko kuti zvinhu zvishande. Uye ivo havana hanya chaizvo (sezvavanofanira kuita) sekureba kwazvinoshanda. Iwo mazano, danho, uye mazhinji ezvese zvinokatyamadza vanhu. Kushanda nesimba kune nzvimbo yako, usandibata zvisirizvo. Sezvo ini ndichikura, zvakadaro, ndinoona vanhu vazhinji vanokwidziridzwa, vanobudirira, kana vapfumi - kwete nekuti vaishanda nesimba, asi nekuti vaive nemazano makuru, kuita kukuru, kana kuita kwakakura.
IDEAS, INITIATIVE, uye kupfuura zvese, IMPACT iyo inokatyamadza vanhu - kwete kuyedza.
Izvi hazvireve kuti handishande nesimba. Ini ndinoshanda nguva dzese - bhurogu yangu izororo remazuva ese kwandiri. Nekudya kwemasikati uye kufamba kwemasikati, iyo nguva yangu yese iri kushanda, pamubhedha, kuverenga, kana nguva nevana vangu. Ndinoda basa, ndosaka ndichizviita. Ini handifunge chete kuti yakafanana nemazuva akanaka 'ol apo' basa rakaoma rinobhadhara '. Mazuva iwayo akareba shure kwedu! Kushanda nesimba kunogona kubhadhara mabhiri, asi hakubhadhare mukufamba kwenguva. Zvese zvauchange uine pamagumo ehupenyu hwako murwi wese webasa wakaitwa.
Iri basa remugadziri rinogona kunge risina kutora nhamburiko huru - asi zano rake, danho rake rekuita pariri, uye mhedzisiro ichave kune vedu vatengi chichava chinhu icho kambani yese inobatsirwa nacho.
Basa reBlogging muIE7 Development